Umthwebuli Wezithombe Uphinda Adle Izidlo Zokugcina Zababulali Ababulewe
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Umthwebuli Wezithombe Uphinda Adle Izidlo Zokugcina Zababulali Ababulewe
by admin Mashi 4, 2014
ebhalwe ngu admin Mashi 4, 2014
Enye yezinto ezithakazelisa kakhulu ohlelweni lwezobulungiswa obugebengu 'isidlo sokugcina,' esinikezwa iziboshwa zokubulawa, ngaphambi kokubulawa kwazo. Ngenkathi izisulu zabo zingalokothi zithole ukuhlonishwa okunjalo, ababulali abazobulawa maduzane banikezwa ithuba lokukhetha ukuthi bafuna ukuba isidlo sabo sokugcina sibe yini, njengengxenye yesiko elisukela e-Europe yangaphambi kwanamuhla.
Emuva ezinsukwini zakudala, inkolelo yayiwukuthi isiko laliyovimba umoya wombulali obulewe ukuthi angabuyeli ukuyofuna impindiselo kulabo abaqeda impilo yakhe, ngokunikelwa nokwamukelwa kwesidlo esikhethwe ngesandla esisebenza njengesenzo intethelelo, isukela kowahluleli iye ekubulaweni, futhi ngokufanayo.
Iningi lamazwe lapha e-United States lisanikela ngesidlo sokugcina kwiziboshwa ezikulayini wokufa, okuvame ukukhonzwa ngosuku, noma ngosuku lwangaphambi kokubulawa kwabo. Isiko elixakile, impela, kodwa lelo lomthwebuli wezithombe uHenry Hargreaves alithola liwukuqonda okuthakazelisayo ezingqondweni zalabo ababulalayo.
Wazalelwa futhi wakhulela eNew Zealand, uHargreaves usanda kuthola uhlu lwezicelo zokugcina zokudla, okwamenza ukuthi athathe ikhamera yakhe ethembekile futhi enze lokho kudla kuphile. Uthi: “Njengoba ngangifunda izicelo, ngaqala ukuzibheka lezi ziboshwa njengabantu hhayi izinombolo nje. Indaba yaba ngokoqobo ngokwengeziwe engqondweni yami futhi ngangifuna ukuyimela le ngamehlo. Izinqumo zethu zokupheka zivame ukusho okuthile ngathi kwesinye isikhathi esingakwazi ukukusho kalula. ”
Bheka ukuphinda uthwebule izithombe okuthakazelisayo ngezansi, uHargreaves akubiza ngochungechunge oluthi 'No Seconds', futhi ufunde kabanzi ngaye iwebhusayithi yakhe esemthethweni.
Ubuciko obusabisayoPhotographyubugebengu beqiniso
Okuthusayo Kubuyela Ekhaya - Mashi 4, 2014
U-Elisa Lam, isidumbu esitholakale ethangini lamanzi ehhotela, sigqugquzela i-movie entsha iHorror